musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Hawaii mahotera anoona kudzikira kwemari uye kugara
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Hawaii New International Travel Zvinodiwa
Maindasitiri emahotera eHawaii akaona kuderera munaGunyana RevPAR uye kugara munzvimbo yepasi rose zvichienzaniswa naSeptember 2019, muchidimbu nekuda kwemhedzisiro yemusiyano weDelta uyo wakaratidza kudiwa kwekufamba.
Hotera yeHawaii RevPAR pasi 13.5% munaGunyana 2021 ichienzaniswa naSeptember 2019 nekuda kwekugara pasi.
Hotera dzeHawaii dzichiri kutungamira nyika muRevPAR neADR.
Kuburikidza nemwedzi mipfumbamwe yekutanga yegore ra2021, kuHawaii mashandiro ehotera nyika yese yakaramba ichikanganiswa nedenda re COVID-19.
Mahotera eHawaii nyika yepasirese yakashuma mari yakakwira zvakanyanya mukamuri inowanikwa (RevPAR), avhareji zuva nezuva (ADR), uye kugara munaGunyana 2021 zvichienzaniswa naSeptember 2020 apo kurongedzwa kweHurumende kwevafambi nekuda kwedenda re COVID-19 kwakakonzera kuderera kukuru kwe indasitiri yehotera. Kana ichienzaniswa naSeptember 2019, nyika yese ADR yaive yakakwira munaGunyana 2021 asi RevPAR yaive yakaderera nekuda kwekugara zvishoma.
Zvinoenderana neHawaii Hotel Performance Report yakaburitswa ne Hawaii Tourism Chiremera (HTA), nyika yese RevPAR munaGunyana 2021 yaive $ 168 (+ 442.6%), iine ADR pamadhora 304 (+ 102.7%) uye kugara kwe55.2 muzana (+ 34.6 muzana poindi) zvichienzaniswa naSeptember 2020. inotungamirwa neyepasi pekugara (-2019 muzana poindi) izvo zvaisagona kugadziriswa nekuwedzera ADR (+ 13.5%).
"Indasitiri yeHawaii yehotera yakaona kuderera munaGunyana RevPAR uye kugara kwevanhu munyika yese zvichienzaniswa naSeptember 2019, muchidimbu nekuda kwemhedzisiro yekusiyana kweDelta iyo yakaratidza kudiwa kwekufamba," akadaro John De Fries, mutungamiri weHTA uye CEO. "Izvi zvinotiyeuchidza kuti denda harina kupera uye tinofanira kugara takangwarira kuchengetedza nharaunda dzedu dzakachengeteka uye kugadzirisa hupfumi munzira kwayo."
Chirevo ichi chakawanikwa chakashandisa data rakanyorwa ne STR, Inc., inoitisa ongororo hombe uye yakazara kwazvo yezvivakwa zvehotera mu Hawaiian Islands. MunaGunyana, ongororo iyi yaisanganisira zana nemakumi mana nenomwe remakamuri 144, kana 46,094 muzana yezvivakwa zvese uye 86.0 muzana yezvivakwa zvekugara zvine makamuri makumi maviri kana kupfuura muHawaiian Islands, kusanganisira avo vanopa yakazara sevhisi, sevashoma sevhisi, uye mahotera emakondomu. Kubhadhara zororo uye zvivakwa zvenguva hazvina kubatanidzwa muongororo iyi.
MunaGunyana 2021, vafambi vanosvika vachibva kunze kwenyika vanokwanisa kupfuura zvinotarisirwa neHurumende kwemazuva gumi kuti vazviriritire kana vakabaiwa jekiseni muUnited States kana nemhedzisiro yeECVID-10 NAAT isina kunaka kubva kuTrusted Testing Partner pamberi kuenda kwavo kuburikidza neiyo Safe Travels chirongwa. Musi waAugust 19, 23, Gavhuna weHawaii David Ige vakurudzira vafambi kudzikisira mafambiro asiri akakosha kusvika kupera kwaGumiguru 2021 nekuda kwekusiyana kweDelta zvichikonzera hurongwa hwehurumende hwekuremerwa.